कर्मचारीको तलब बढ्ने भयो, वृद्दभत्ता सरकारको पक्षबाट कटौति गर्ने तयारि - Experience Best News from Nepal
कर्मचारीको तलब बढ्ने भयो, वृद्दभत्ता सरकारको पक्षबाट कटौति गर्ने तयारि
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अपराह्न चारबजे संघीय संसदको दुबै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६को बजेट निर्माण हुनेछ ।
गत मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसमा चुनावका लागि तत्कालीन एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र तयार गरेका थिए । घोषणापत्रमा ’समृद्धिका कार्यक्रमहरु’ भनेर आफ्ना कार्यक्रम उल्लेख गर्दै कृषि, ऊर्जा, यातायात, जलमार्ग, पर्यटनजस्ता धेरै क्षेत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धता गरिएका छन् ।
अहिले संयुक्त रुपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दल तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेको छ । नेकपाले त्यतिबेला घोषणा गरेका योजना निकै महात्वांकांक्षी छन् ।
सोही घोषणापत्रलाई अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यदिशा भनेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रले पनि वामपन्थीको घोषणापत्र नै वाम सरकारको आगामी कार्यदिशा भएको स्पष्ट पारेको बताएका छन् ।
त्यसपछि नेकपाका नेता वामदेब गौतमको संयोजकत्वमा बनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने समितिले घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषय नै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको अधिकारीहरु बताउँछन्
कर्मचारीको तलब बढ्ने, बृद्धभत्ताको आश्वासन मात्रै !
पूर्व गभर्नरसमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामाथि कर्मचारी संघ संगठनहरुले कर्मचारीको तलब बढाउन लविङ गरिरहेका छन् ।निजामति कर्मचारीको उनमा समेत दुई वर्षमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसको पालना गर्ने हो भने सरकारले कर्मचारीको तलव बढाउनु पर्ने छ । दुई वर्षअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेमा सरकारी कर्मचारीको तलव बढेको थियो ।
निजामति कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियनले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडासँग भेटगरि तलव समायोजन गर्न माग नगरेका पनि होइनन् । तर देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीको तलव नबढाउने संकत गरेका छन् । तलब बढ्दा राज्यकोषमा व्यवभार बढ्ने, महंगी बढ्ने भएका कारण सरकार अहिले तलब बढाउने पक्षमा देखिएको छैन । तर कर्मचारीको हौसला बढाउने नीतिमा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै बृद्ध भत्ता भने ५ हजार पुग्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । घोषणा पत्रमा पाँच वर्ष भित्रमा पाँच हजार वृद्धभत्ता पु¥याउने वाम गठवन्धनले उल्लेख गरेका भएपनि कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण वृद्धभत्ता थप गर्ने अवस्था छैन तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामाथि नेकपाका नेताहरुले दवाव दिइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षामा सरकारले गर्दै आएको खर्चलाई लघुबीमामार्फत व्यवस्थित गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
श्रोत भन्छ खतिवडा अलिकति ट्रिक युज गरेर व्रिद्दभात्ता स्थानिय निकायको जिम्मा लगाउने तयारीमा छन्। उनि राज्यको कोषबाट भन्दा भात्ताहरुको लागि स्थानिय सरकार बाट नै श्रोतको खोजि होस् भन्ने चाहन्छन। उनको खास योजना चाहि विस्तारै ब्रिद्दभाता नै कटाएर उक्त रकम बाट दिर्घकालिन रोजगार सिर्जना गर्ने छ।